Xiaomi Mi Rịba ama 10, inyocha miri emi na ule igwefoto | Gam akporosis
Xiaomi Mi Rịba 10, inyocha miri emi na ule igwefoto
Ihe ekwere na nkwa bụ ụgwọ, anyị amatakwala na anyị nwere nyocha miri emi banyere otu n'ime ngwaọrụ gam akporo ndị kacha ewu ewu na ọnwa ndị na-adịbeghị anya na-echere gị niile, Xiaomi Mi Note 10. Ọnụ nke hapụrụ anyị ezigbo echiche na ileba anya mbụ anyị ebe anyi natara ngwa ngwa na unboxing na layout.
Anyị nọ ebe a iji wetara gị nyocha miri emi nke Xiaomi Mi Note 10, gụnyere arụmọrụ na ule igwefoto. Nọnyere anyị ma chọpụta ihe niile anyị ga-agwa gị gbasara ngwaọrụ Xiaomi a nke gbanwere usoro Mi Note "ihu".
Dị ka oge niile, anyị na-akwado ka ị buru ụzọ gafee vidiyo nke na-eduga nyocha a, nke ị nwere ike ịhụ etu anyị siri mee nyocha ndị gosipụtara ebe a, yana ezigbo arụmọrụ ya ebe anyị na-arụ ọrụ ahụ. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na iji ohere ịdenye aha, ị ga - enyere ndị Androidsis aka ka ha toro, ebe anyi nwere ike iza obi abụọ niile.
⚠️ Ọ bụrụ, na aka nke ọzọ, ekpebiela gị kpamkpam, ị nwere ike zụta Xiaomi Mi Note 10 ugbu a na ọnụahịa kacha mma yana nkwa niile dị njikọ a.
1 Design: Izobe ibu na ọkpụrụkpụ
2 Multimedia ọdịnaya: Otu nke wayo na otu nke ájá
3 Autonomy: Ihe nzuzo ya
4 Nnwale igwefoto
5 Mkpebi nke Editor
Design: Izobe ibu na ọkpụrụkpụ
Anyị na-ekwu maka nnukwu ọnụ, anyị agaghị echefu na ọ dabere na akụkụ nke iPhone 11 Pro Max na Google Pixel 4XL, ekwentị abụọ na-anaghị apụ apụ maka kọmpat. Maka ya, Xiaomi arụọla ezigbo ọrụ, o nweela akụkụ azụ, ihe ọ na-eme n'ọtụtụ ngwaọrụ ya. ma site na usoro nkịtị na site na Redmi (ọnụ ala). N'agbanyeghị ihe niile, ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na anyị nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ sentimita 6,5, ụlọ ọrụ Asia emeela ezigbo ọrụ nke mkpokọta, na-echefughi okpokolo agba ya zoro ezo na osisi dị ala asymmetrical.
Ihe si na ya pụta bụ na agbanyeghị na ọ bụ ngwaọrụ dị arọ, karịa Samsung Galaxy S10 +, Google Pixel 4 XL ma ọ bụ Huawei P30 Pro dịka ọmụmaatụ, ọ dị mma maka iji ya kwa ụbọchị. Ogo ya buru ibu, na nke m, m hụrụ ngwaọrụ ndị nwere anụ ọhịa anụ ọhịa dị obere karịa, mana iji ya kwa ụbọchị abụrụla nke kachasị mma. Ọ na - enyere aka na - ewe ọtụtụ ọdịnaya enyere ọtụtụ ogo ya, ọ naghị ada mba gabiga ókè ibu ya, Ekwenyesiri m ike na nhazi nke Xiaomi Mi Note 10, n'agbanyeghị usoro dị egwu nke igwe foto ya.
Multimedia ọdịnaya: Otu nke wayo na otu nke ájá
Ogologo oge nke Xiaomi Mi Note 10 na-akwado echiche mbụ anyị. Anyị na-ahụ na ihuenyo a mkpebi nke 1080 x 2340 FullHD +, pikselụ nke na-enye pikselụ 398 na anụ ọhịa ọ bụla, nke a na AMOLED panel nwere ezigbo nhazi na-enyere anyị aka ịnụ ụtọ ọdịnaya nke ọtụtụ ụdị, ma ọ bụ fim ma ọ bụ ọdịnaya YouTube dị mfe. Ogwe 6,47 nke anụ ọhịa nwere 87,8% site n'ihu ma n'eziokwu, na-echeba ọnụahịa anaghị m ajụ ihe ọ bụla ọzọ site na ihuenyo a.
U BUY Xiaomi Mi Note 10
Ahụmahụ ahụ na ihuenyo curved abụrụla afọ ojuju n'agbanyeghị ihe ọghọm na-emetụ na mberede nke ụdị ụdị a. Enweghị m mmasị na ụda nke ukwuu, anyị chọtara ike zuru oke mana nke ahụ na-emebi mmetụta dị mma na ihuenyo ga-ahapụ gị. Na nke mbụ anyị enweghị ụda stereo, ike niile na-esite na ala, ihe dị ịtụnanya na njedebe nke nha a. Ma onye na-ekwu okwu ma ọ bụ ọkà okwu na-ada ụda adịghị apụta ìhè, ebe anyị na-ahụ oke dị oke mkpụmkpụ, enweghị ọdịiche na ike dị ọcha.
Autonomy: Ihe nzuzo ya
Ọ baghị uru ikwu, ha 5.260 mAh nke a Xiaomi Mi Rịba 10 Agaghị m ahapụ ihe ọ bụla na mberede na nke a. Anyị na-amalite na ngwa ngwa odori, nke na-ewe anyị odika Oge elekere 1 na 40 nkeji iji kwụọ ụgwọ zuru ezu, nke adịghị njọ ma. Anyị na-ekwukarị banyere chaja a gụnyere na ngwungwu ngwaọrụ, nwee ike inye ngwaọrụ ahụ 30W site na USB-C. Ihe si na ya pụta bụ ihe karịrị 10 awa nke ihuenyo na-enweghị messing elu, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị abụọ nke iji ya eme ihe kwa ụbọchị na-enweghị "na-ahapụ anyị tọrọ atọ." Homehapụ ụlọ n'ụtụtụ na 40% batrị na ngwaọrụ a na-enye gị mmetụta nke ndị ọzọ na-esighi ike iwepụta, enyemaka.
Obere ihe ekwesighi ikwu banyere Xiaomi Mi Rịba 10 ya na nkwa Ihe nhazi Qualcomm Snapdragon 730G na o mezuola ọrụ niile kwa ụbọchị n'egosighi adịghị ike izugbe. Anyị ahụla ụfọdụ "nghọta" ndị ọzọ nwere ike ịkọwa na oyi akwa Xiaomi, ọ bụkwa na nsogbu ndị a emeela ọkachasị na ngwa igwefoto ma ọ bụ ụfọdụ ngwa ala. Nwere ike ịlele wee nweta ya na ọnụahịa kachasị mma na njikọ a.
Na Geekbench anyị na-ahụ isi 524 Single-Core na 1660 maka Multi-Core, nke na-ewetara ya nso na Pocophone F1, dịka ọmụmaatụ, mana n'ụzọ doro anya na n'agbanyeghị arụmọrụ dị mma, ọ dị n'etiti etiti.
Anyị na-aga ese foto, otu n'ime isi ihe Xiaomi Mi Note 10 chọrọ ka ọ pụta ìhè nke kachasị na 108 MP. Anyị na-amalite site na isi ihe mmetụta gị 108 megapixel 1 / 1,33 inch (1,6 μm pixel) na oghere 7P na oghere f / 1,69. Nkà na ụzụ pixel-binning 4-in-1 na 4-axis optical image stabilization. Ihe dị iche na anya gba ọtọ na foto 27MP nke bụ usoro ọkọlọtọ, ma ọ bụ 109MP nke anyị nwere ike ịhọrọ na bọtịnụ nke ya bara oke uru na ihuenyo mkpanaka belụsọ na anyị na-eme mbugharị. Na-ahụ ihe ọzọ mgbe anyị na-ese foto na "Night Mode" nyere ozi ọ na-ewepu.
? Benefits kwenyesiri ike na uru nke Xiaomi Mi Note 10? Ọ dị mma ugbu a Nwere ike ịzụta ya na ọnụahịa kacha mma site na ịpị ebe a
Igwefoto na-agbakwunye na gburugburu ọkụ, anyị anaghị enwe ekele maka mkpọtụ na ọdịiche dị ezigbo mma, ọkachasị mgbe Artificial Intelligence na-etinye saturation. Banyere gbaa megide ọkụ ma ọ bụ karịa dị egwu, ọ ka mma ịhọrọ mgbe niile maka mmegharị HDR ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ gbaa ọsọ. Na Ọnọdụ eserese na-agbaso ma o yie ka ọ bụghị aka.
Uzo di elu nke Ultra Wide nke 117 degrees na aperture f / 2.2 na 20 megapixel sensọ na-ata ahụhụ dịtụ karịa mgbe ọkụ dara na ubé idozi deformation nke n'ọnụ ya.
Igwe anya telephoto abụọ na anya Macro:
Igwe Telephoto nwere ihe mmetụta 12 megapixel (1,4 2m pixel) ya na ihe ngosi anya 2.0x na oghere f / XNUMX.
Igwe ihe telephoto nwere ihe mmetụta 5 megapixel (1 μm pixel) ya na mbugharị anya 5x, 10x ngwakọ na mbugharị dijitalụ 50x, oghere oghere oghere f / 2.0 na mgbanaka anya axis anọ.
Super macro lens nwere ihe mmetụta abụọ megapixel.
Ha na-arụ ọrụ dị ka atụ anya nyere ikike ọrụaka, na-enye nsonaazụ dị n'etiti, na-enweghị oke ma ọ bụ ihe ọ bụla dị ịrịba ama, nwere oke mkpọtụ gbasara mkpọtụ. Otu ihe ahụ na-aga maka igwefoto selfie, ọ naghị ata ahụhụ oke oke ọkụ kama ọ na-enye ọnọdụ eserese mara mma.
Banyere ndekọ vidiyo, ị nwere ike ịhụ nsonaazụ ikpeazụ na vidiyo dị n'elu.
Mkpebi nke Editor
€410 a €510
Xiaomi Mi Nyocha 10
Onye edemede: 70%
N'agbanyeghị na ọ bụghị ihe ọhụụ na imewe, ọ na-arụ ọrụ ma ọ masịrị m
Batrị ahụ buru ibu, arụmọrụ dị mma
Igwefoto dị ọtụtụ
Na-enye ezigbo ego
Da adighi ka elebara anya
Senfọdụ ihe mmetụta na-ata ahụhụ karịa ihe dị mkpa na ọnọdụ ọjọọ
A na m atụ uche wireless ụgwọ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Xiaomi Mi Rịba 10, inyocha miri emi na ule igwefoto
Oku nke Ọrụ: Oge Oge XNUMX Dị Ugbu A
Demon Blast bụ onye na-agba égbè mbụ nke nwere eserese na-atọ gị ụtọ